E6010 yi-rutile-cellulosic sodium uhlobo electrode. Ingabinayo i-welds kuyo yonke indawo (ngakumbi indawo ethe nkqo) kunye ne-DC + kuphela. Inentsebenzo egqwesileyo ye-welding njenge-arc ezinzileyo, i-spatter encinci, ukususwa kwe-slag kunye nobuchule bokulawula njl njl njl.
1. Ngokubanzi, awudingi ukomisa kwakhona i-electrode ngaphambi kokuwelda. Xa ichaphazele ukufuma, kufuneka iphinde yome nge-70 ℃ -90 ℃ ngeyure enye.
2. Umhlwa, i-oyile, amanzi kunye nezinye izinto ezingafunekiyo kwindawo ye-weld kufuneka zisuswe ngaphambi kwentsimbi.
Ukufunyanwa kwesiphene seX-ray: inqanaba
I-electrode yethu ye-welding ine-spatters ezimbalwa, i-smog encinci, i-arc ezinzileyo, kulula ukuyibuyisela kwakhona, inkunkuma encinci kunye neenzuzo njl. Olona loncedo lubaluleke kakhulu kwi-electrode yethu ye-welding kukususa i-slag ngokuzenzekelayo.
UKWENZIWA KWEMICIMBI YAYO YONKE IMISIMBO YENTSIMBI: (Wt.%)
IINKCUKACHA ZOMatshini ZOKWENZIWA KWESIMANYAMA SONKE:
IINKQUBO ZOKUSEBENZA NGOKUQHELEKILEYO: (DC +)
5kg / ibhokisi, 4boxes / ibhokisi, 20kgs / ibhokisi, 50cartons / pallet. 21MT -26MT 1X20 nganye, FCL.
Siyayixhasa i-OEM / i-ODM kwaye sinako ukwenza ukupakisha ngokokuyila kwakho, nceda unxibelelane nathi ngengxoxo eneenkcukacha.
I-Shijiazhuang Tianqiao Welding Materials Co., Ltd yasekwa ngo-2007. Njengomvelisi we-electrode we-welding oqeqeshiweyo, sinamandla obuchwephesha, izixhobo zovavanyo olupheleleyo lwemveliso ukuze sikwazi ukugcina umgangatho wemveliso ozinzileyo. Iimveliso zethu zibandakanya iintlobo zee-electrode ze-welding ezinophawu lwe- "Yuanqiao", "i-Changshan", enjenge-carbon yentsimbi ephantsi, i-Iow alIoy insimbi, i-steels enganyangekiyo ubushushu, i-insimbi enobushushu obuphantsi, i-stainless steel, i-iron yentsimbi, i-electrode e-welding eqinileyo olungumgubo welding olungumgubo.
Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kumacandelo oqoqosho kuzwelonke, anje ngoomatshini, isinyithi, ishishini lepetroli yeekhemikhali, ibhoyila, uxinzelelo lwenqanawa, iinqanawa, izakhiwo, iibhulorho, njalo njalo, Iimveliso zithengiselwa kulo lonke ilizwe, kwaye Ifunyenwe ngabasebenzisi abaninzi. Iimveliso zethu zinokusebenza ngokugqwesileyo, umgangatho ozinzileyo, ukubumba okuhle, kunye nokususwa okuhle kwe-slag, ukubanakho ukumelana nomhlwa, iStata kunye nokuqhekeka, ukusebenza okuhle kunye nokuzinzileyo kwendlela yokusebenza kwentsimbi. Iimveliso zethu ikhulu ekhulwini zithunyelwa kumazwe angaphandle kwaye bathengise ihlabathi ngokubanzi, ikakhulu US, iYurophu, Umzantsi Melika, Australia, Afrika, Middle East, mpuma Asia njl njl iimveliso zethu ukuhlangabezana abathengi 'shushu ngenxa mgangatho ophezulu, ukusebenza ebalaseleyo kunye ixabiso kukhuphiswano.
Egqithileyo Welding umgubo: E6013
Okulandelayo: I-E71T-GS- ucingo lwe-welding cored wire